�g�b�v�y�[�W �� ���� �� �V���i�� �� Uye wokurarama chikwereti kadhi chete
Wokurarama chikwereti, inova nzira muripo kuti kuti debited imwe mari wakaiswa panguva chikumbiro munhoroondo yakasarudzwa, iri rakapa ndechokuti mumakore achangopfuura wokurarama zvikwereti chete kadhi kuti unyanzvi mune basa iri, akava dzakakurumbira. Mukusarudza-siyana wokurarama zvikwereti chete kadhi kubva makambani auya.
vakazvitsaurira kadhi zano, kuti pepa
wokurarama chikwereti rokubhengi chete, pane chinhu chiri kusarudzwa kunze Chikoro Ichokwadi kuti kutaridzwa chemhosva mari mune dzinonzi twasu-mutsetse hwaro.
twasu-mutsetse kosi ndiyo nzira inoita kuti kutaridzwa chemhosva mari muna 1000 Yen kubva inokosha ruoko 5000 Yen kana kupfuura, asi zvimwe zviri pane kuti uzere makosi, kosi uye, nepakati yemasiraidhi kune zvizere mutsividzo yaiva miniti kuwanikwa muripo dating pane zvinhu Zvechokwadi.
ichi ndechokuti isu kurega Vaiisa chemhosva mari achishandisa nechiyero Somuenzaniso, kupedza ose mwedzi 10,000 Yen kana mukati 100,000 Yen, unogona kutaridzwa 20,000 Yen Kana pfuura izvozvo. Wokurarama chikwereti, nekuti ibasa wepagore chimbadzo 15% kufarira, kubudikidza kuwanda pakukoka muripo nguva kuwedzera nhamba zviyero iripo, mubhadharo kufarira wakaitawo dzakawanda anonzi kuvamirira, ndiwo nzira unoenderana nayo.
wokurarama chikwereti rokubhengi chete, achava zvose yokugara wokurarama chikwereti kana ukashandisa kadhi. Toka unotambudza kazhinji kutaura kana kwete mari iri chitoro, vanhu vanofunga kuti kutarira hakuna kunaka zvauri kutarisana. Uyewo, kana iwe achidzorerwezve kubudikidza weboka, kwete chete tinofanira kusarudza kangani kubhadhara nerimwe chigadzirwa, uko vazhinji, zvakaoma kuona tichifunga upenyu Fund, ine zvakanakira uyewo Habukeru nesimba management .
ropafadzo kakawanda mumakore achangopfuura vachikodzera
, makwikwi kuti mutengi pakuunganidza wokurarama kadhi kwave kudziyisa pamusoro, pane zvinhu zvakawanda zviri kwemasanga basa sezvo mugoropafadzwa chinobatsira. Kana makore 18 kana vakura, panewo apo unogona kusaina kumusoro kadhi iri uyewo mudzidzi, isuwo kushingaira ichiyerera, akadai neterevhizheni CM. The wokurarama chikwereti, ose mwedzi Nepo kubhadhara kuramba mari, panewo kuitika kuti mubereko mubereko iri kunzvengwa kubva zvokuti, pakupindura ichi, kana kuti asunungure kwokutanga kufarira basa, asi anogona kubhadhara ezvinhu panguva kushandisa nengaidzo iri chete nzira paIndaneti It akagadzwa kana.
pamwe kuvandudza mabasa aya, pane zvinhu zvakawanda zvinoratidza vava uderedze kuunganidza pakuvira. Annual nhengo kubhadhara iri kubhadharwa, basa hakusi kufanana kadhi unonzi goridhe uye Premier makadhi vari wakabudiswa avo vari kwemasanga. A mukuru rutapudzo yepfungwa pagore muripo, panewo kadhi kuti anoenda dzakadai tsaona inishuwarenzi kuti mhiri kwemakungwa kufamba. Vaya akaunganidza makiromita kana, nomwedzi iyo wokurarama chikwereti mubereko kunoitika pane basa, zvakadai kuwedzera rutapudzo mwero achitandadza.
kuti kushandisa mazano akanaka
basa iri panguva unoshandiswa, pane nzira yakaiswa kuwedzera pamwedzi yakatarwa uwandu. Wokurarama zvikwereti chete kadhi iri nzira yokuti pamwedzi mutsividzo mari pane chinhu chinogona kumisa kusvika mamiriyoni 1 Yen dzakawanda, kushandiswa senzvimbo substantially inotevera mwedzi 1 nguva kuripwa kadhi achishandisa ichi. Nepo kuva basa yakazara kadhi munhu mukuru rutapudzo zvazvingava, kufarira hakuitiki. Makadhi chikwereti yakapiwa mumakore achangopfuura, kune vaya vari rwoga akaita wokurarama mbiri panguva iwe akasaina kumusoro. Ngwarira panguva chikumbiro.
pazasi, chiri nyaya ipfupiso kukurumbira pakati kadhi vakazvitsaurira. (10 May 2015 kunyora)
�� DC kadhi
�� Cedyna kadhi Services kuti handishanduki pamwechete munda makadhi Premier makadhi vari wakabudiswa avo vari kwemasanga. A mukuru rutapudzo yepfungwa pagore muripo, panewo kadhi kuti anoenda dzakadai tsaona inishuwarenzi kuti mhiri kwemakungwa kufamba. Vaya akaunganidza makiromita kana, nomwedzi iyo wokurarama chikwereti mubereko kunoitika pane basa, zvakadai kuwedzera rutapudzo mwero achitandadza.
�� Cedyna kadhi Panewo vaya. Ngwarira panguva chikumbiro.
�� Cedyna kadhi